काँग्रेसको प्रश्नः देशमा सरकार छ भने कहाँ छ ? « Bagmati Samachar
काँग्रेसको प्रश्नः देशमा सरकार छ भने कहाँ छ ?
६ मंसिर २०७५, बिहीबार १४:४२
६ मंसिर । काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल काँग्रेसले सरकारको नौ महिने अवधि पूर्णत असफल रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
मंसीर ३ गते वर्तमान सरकार गठन भएको ९ महिना पुगेको छ । ९ महिना पुगेको यो घडीमा “नेपाल देशमा सरकार छ ? छ भने कहाँ छ” भनेर छोटो तर कारुणीक प्रश्न सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । यो ९ महिनामा मुख्य ९ प्रश्नमा सहि जवाफ पस्कन सरकार असफल भएको वस्तुगत तथ्य जगजाहेर छ ।
१. लोकतान्त्रिक संस्कृतिः लोकतान्त्रिक प्रकृयाको चर्चा मात्रै त्यसको मानक किमार्थ होइन ∕
२. राष्ट्रवादः पुरानो दावी र पछिल्लो स्थितिको तुलना ∕
३. संघियताः कम्यूनिष्ट दर्शनले नहिडेको बाटो, असफल तुल्याउने सुनिश्चित षडयन्त्र ?
४. सुसासनः नमच्चीने पिङको सय झड्का ∕
५. बजारमूल्यः कम्युनिष्ट सरकार बन्न अघि ०७४ माघ महिनाको बजार मूल्यसँग तुलना गर्दा सहज ∕
६. शान्ति सुरक्षाः प्रधानमन्त्रीकै निर्वाचन क्षेत्रमा २ को हत्या ∕
७. न्यायालयः साझा आस्थाको थलोमा राजनैतिक आस्थाको अतिक्रमण ∕
८. संविधानप्रति अपनत्व विस्तारः सत्तालाई बलियो बनाउन वार्गेनिङ्ग चिप्स, प्रगति शुन्य ∕
९. समृद्धि यात्राः विना प्रतिस्पर्धा गेजुवालाई वुढी गण्डकी । निजगढ विमानस्थल कागजमै अलमल, केरुङ–काठमाण्डौं–रक्सौल, रेल चर्चा फायलमा बन्द ∕
महासमितिको बैठक तीव्र गतिमाः प्रवक्ता शर्मा
पत्रकार सम्मेलनमा महामन्त्रीद्वारा प्रस्तुत गरिने सांगठनिक प्रतिवेदन एवं कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन आन्तरीक तयारीको अन्तिम क्रममा रहेको र महासमिति वैठक तयारीकै मुल विषयमा केन्द्रीत रहेर मंसीर ९ गते केन्द्रीय समितिको वैठक बोलाइएको दोहोर्याए ।